War deg deg:Shabaabka Kismaayo oo Kabteey ma aragtay ay ku dhacday “Duqeyn Socoto - iftineducation.com
War deg deg:Shabaabka Kismaayo oo Kabteey ma aragtay ay ku dhacday “Duqeyn Socoto
aadan21 / May 30, 2012
iftineducation.com – Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayaa waxay sheegayaan in duqeyn aad u xoogan ay ku socoto magaaladaasi qeybo ka mid ah iyadoona Xarakada Al-shabaab kala carar aan caadi ahayn uu soo wajahay.
Saldhigyada Al-shabaab ee ay ku leeyihiin Kismaayo iyo waliba sidoo kale xarumo hubka ay ku keydsadaan ayaa la sheegayaa in si gaar ah ay ugu socoto duqeyntaan oo ay geysanaayaan diyaarado dagaal iyo sidoo kale Maraakiib dagaal.
Duqeyntaan ayaa waxay geesatay qasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jirta, iyadoona aan la xaqiijin karin qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca inta ay la egyihiin, waxaana xaaladda ay tahay mid aad u kacsan.
Badi reer Kismaayo ayaa lagu soo waramaayaa inay magaalada ka kala carareen iyagoona afka aadiyay magaalada banaankeeda si ay uga bad baadaan duqeyntaan xoogan ee lala eeganaayo.
Warkaan wixii kusoo kordha kala soco wararkeena kale Insh Allah.
kaftan Saxaafadeed dhab ah.
Waligaa Lamaantaada Qaladkaan Oo Kale Haka Galin Waligeed Kama Samreyso